अलविदा कर्ण बोहोरा : निष्ठुरी काल उनका हकमा बेशरम आयो, बेतुकमा आयो, अनायासै आयो – MySansar
Posted on November 27, 2016 by सूर्य खड्का
जिन्दगीको पीचमा हाफ सेन्चुरी पनि पार गर्न नपाउदै वैगुनी यमराजले पत्रकारिता क्षेत्रको एउटा होनाहार प्रतिभालाई आफनो बनाईसकेको छ । सधै अरुको समाचार बनाउने कर्मका योद्धाहरुले आफ्नै सहकर्मीको देहावसानको खबर बुुन्नु कति पीडादायी र कष्टकर हुन्छ भन्ने हामी अनुुभुुत मात्रै गर्न सक्छौं, अभिव्यक्त गर्न शव्दै हुन्न ।
मान्छेको चोला हो । मर्नेपर्ने । पत्रकार बोहरा कर्ण पनि अजम्वरी थिएन्न । तर निष्ठुरी काल उनका हकमा बेशरम आयो, बेतुकमा आयो, अनायाशै आयो। अप्रत्याशित आयो र अल्पायूमा नै आयो । यस अर्थमा यो क्रुर कालप्रति सदा, सदैव सबैको घोर आपत्ति र घृणा छ, रहिहरनेछ । यमराज पनि यदि जीवन हो भने, चीरकालसम्म तेरो सत्यानाशै मात्रै भैरहोस । छन यदि लोकमा भगवान भने तेरो कहिल्यै भलो नहोस । यो आशुु, आशुु र आशुुको बियोगान्त शोकको घडीमा पूर्ण कटाक्ष त्यो निर्दयी कालप्रति ।
बोहरा कर्ण हुन स्वर्ण सिंगै नेपाली पत्रकारिता आकाशका । प्रकृतिको सुुन्दर भूूगोल, नेपालको स्वर्ग सुुदुुरपश्चिमबाट नेपाली पत्रकारिता उदाएको असल कलम सिपाही हुन कर्ण । नामले कर्ण उनी स्वर्ण हुन । सुन नै हुन । २४ क्यारेटकै असली सुन हुन सुुन ।
पत्रकार कर्णलाई पत्रकारिताको स्वर्ण भन्नुु कुुनै काल्पनिक शव्द उपमा मात्रै होईन । ३७ बर्षे लक्का जोवनमा उनले गरेको सूचनाको खेती, संचारको कर्म र देश र जनताप्रति देखाएको पत्रकारिता कर्मको फल हो । एउटा केटो मष्तिष्कले सही र गलत छुुट्याउन, खुट्याउन सक्ने भएदेखि नै कलम लतमा फस्यो । त्यो पनि सुविधासम्पन्न राजधानी खाल्डोबाट हैन, सूूर्य पनि अस्ताउन मात्रै सुुदुुरपश्चिमा जान्छन भनेर मानिने त्यो कंचनपुरबाट, त्यो विकट, सुदुुर भूूस्वर्गबाट । उदायो उ सौर्य भएर पश्चिमबाटै, चम्किरहयो पुरै गोलाद्र्धभरी, आकाशैभरी ।
मान्छे बाच्ने भनेकै उसका असल कर्महरुमा न हो । यस अर्थमा पत्रकारिताका स्वर्ण कर्ण जीवन्त छन, जुुग जुुग पर्यन्त । सुुदुुरपश्चिममा उनले चलाएका दैनिक, साप्ताहिक वा एफएम कहिल्यै समाचार दुनियाँबाट बिरानो हुने छैन्न । समाचारकर्मका सधै अव्वल, सधै अग्र र शीर्ष कर्ण सधै चिरन्जीवि छन, रहिरहन्छन ।
कर्णको भौतिक उपस्थितिमा अचानक लागेको स्थायी पूर्णबिरामका बावजुत पनि कर्ण सदाकाल हामीसंगै छन, माझमै छन, उनका कलमले बुनेका खबर तरंगमा, अक्षरहरुमा, आवाजहरुमा । सुुदुुरलाई राजधानीसंग जोड्ने त्यो कलम सिपाहीले जीवनसंग विश्राम लिए पनि कर्मसंग लिएको छैन, हैन । उ स्वर्ण नै हो, सुदुुरको ऐना काठमाण्डुुलाई देखाईदिने, त्यहाँको सुन्दरतालाई सिंगै देश विदेशमा पस्किदिने । त्यो विकट भूूगोल, जीवन, सभ्यता र संस्कृतिलाई सिंगै देश, विदेशसम्म जोडिदिने । सिंहदरवारले सुदुुरलाई पीठ्यू फर्काएर उभिए पनि कर्णका कलमले त्यसको प्रतिवाद गरयो, गरिरहयो । अनि उ न मर्छ, न झुुक्छ, न थाक्छ नै । अविरल छ उसको कर्म यही दुनियाँमा । छैन र ?
कर्णहरुको जोश, जाँगर र उमंग थिएन भने शायद सुन्दुर सुदुर यसरी काठमाण्डूमा पोखिदैन्थ्यो, दुनियाँका आँखा र मन मष्तिष्कमा कैद नहुन सक्थ्यो । आफैं कर्णहरु कलम कर्ममा नहोमिएका भए, कहाँ यति विघ्न मुलधारे पत्रकारितामा सुदुुर समेटिन्थ्यो होला र ? त्यसैले त कर्ण स्वर्ण हुन ।
परमेश्वरसंग उनको वैकुण्ठवासको प्रार्थना गर्नु शिवाय केही छैन अब उपाय । तै पनि उनी जीवन संगिनी ममतालाई उपचार गराउदा गराउदै आफैं क्रुर कालको कोपभाजनमा परेकोले सिधै स्वर्गवासका लागि हकदार छन । वास होस त्यस्तै सुुन्दर, सुुखद, सफल परलोकमा पनि ।
पंत्तिकारसंग कर्णको सहकार्य २०५७ मा सुुरु स्पेशटाईम दैनिकको व्यानरमुनी भएको थियो । सुुुरुदेखि अन्तिमसम्म उनी त्यसको संवाददाता रहे ।
स्पेशटाईम बन्दपछि उनी च्यानल नेपालतिर लागे । हामी अन्तै लाग्यौं । मेरो जिम्मेवारी स्र्पोर्टसमा भएकोले प्रायः उनी गजेन्द्र थापा, रोशन राउत र पंत्तिकारसंग खेलकुदमा रिर्पोटिंगका बेला सम्पर्कमा हुन्थे । कहिलेकाही काठमाण्डुु आउदा सिंगै एउटा भद्रता, सुुन्दर, सुुसंस्कृत र मिजाससंग साक्षत्कार हुन्थ्यो । बढी उनी जिल्ला व्यूरो संयोजक विश्वनाथ आचार्यको सम्पर्कमा रहन्थे ।
ठयाक्कै मिति याद नभए पनि २०६३ कात्तिकको तेस्रो साता उनको कर्म थलो कंचनापुर, धनगढीमा पंत्तिकारको भेट भयो । एभिन्यूज टेलिभिजनको जिल्ला व्यूरो छनौटको शिलशिलामा अभिभावक पत्रकार केदार कोईरालाको नेतृत्वमा वरिष्ठ क्यामेरापर्सन नवराज अधिकारी, चालक वजरंग चौधरी र पंत्तिकार बिभिन्न जिल्ला हुदै सुदुुर पुुगेका थियौं । हाम्रो टीमले दोधारा चाँदनी पुुग्नुु अघिल्लो रात कर्णसंग बिताएको थियो । बडा रंगिन साँझ थियो त्यो । सबै खर्च कर्णकै । शायद केदार दाई, नवराज दाई वा वजरंगलाई त्यो यात्राका प्रसंग आउदा कर्णको न्यानो आतिथ्यताको उचाईले कहिल्यै नछोड्दो हो । पछि फर्कदा पनि बिदाई लिएरै आयो हाम्रो त्यो टोली । मंसिर ५ को शान्ति संझौताको रिर्पोटिंगको क्यामेरा वर्क नवराज दाईले बडा हतारमा त्यही यात्राको उत्कर्षमा गर्नुुभाथ्यो । त्यतिबेला उनी एक दैनिक र साप्ताहिक चलाउथे स्थानीय तहमा । निकै चलेका पत्रिका थिए उनका ती ।
क्र्णसंगको भौतिक भेट लगभग त्यति नै हो । पछि उनी लामो समय पंत्तिकारको उठवसमा रहेन्न । उनलाई नेश्नल टेलिभिजनमा उतिसारो स्थान दिन सकिएन । कारण न्यूज २४ मा उनी आवद्ध भैसकेका थिए । सहकर्मी प्रेम बानियाँसंगको उनको घनिष्टताले पनि शायद उनलाई नेश्नल टेलिभिजनतिर लम्कनै दिएन ।
सुुदुरको वैभवलाई नेपालका टेलिभिजनहरुले विशेष महत्वका साथ कभरेज गर्ने गरे पनि त्यसमा बाजी मार्ने टेलिभिजन थियो नेश्नल । विशेष न्यूजका अलवा कर्णाली पारिको नेपाल होस वा पश्चिमका कुरा । यस्ता कार्यक्रमका कारण सुदुुरमा नेश्नललाई आफ्नै ठान्थे सबै दर्शक । त्यसको पदचापमा पछि मात्रै एभिन्यूज र न्यूज २४ हिडे ।
कर्णले त्यो कर्म पुरा गरे २४ मा र अन्य उनी आवद्ध मिडियाहरुमा । राजधानीका धेरै मिडियामा उनी आवद्ध रहे । यसैकारण उनी सधै सुदुुरलाई बाँकी नेपालसंग जोड्ने सेतुुपात्र रहे । उनी सधै त्यही बसे, शायद जन्मथलोप्रतिको उनको प्रेमको यो उत्कर्ष थियो । जति पत्रकारिता गरे जन्मथलोको भलोमा समर्पित गरे । उनले केही लेखे भने, बोले भने, खिचे भने आफ्नै जन्मभुमिमा रहेर, उसकै हितका लागि मात्रै गरे । र त, उनी अरु भन्दा उम्दा, अग्ला र जीवन्त रहे ।
जिल्ला पत्रकारलाई समयमा पारिश्रमिक नदिने राजधानीका मिडियाहरुको रोगका शिकार उनी पनि भए भन्ने लाग्छ । जिल्लाका पत्रकार औशी पूर्णेमा तलब लिन आउदा पनि या त नदिने, दिए ढिलो गरिदिने र दिएपछि हाकिमले नै आधा जसो रकम रंगिन रातमा सिध्याईदिने प्रायः रोगी प्रवृत्तिबाट उनी पनि बाँचे होलान जस्तो लाग्दैन, भलै पंत्तिकार त्यो प्रवृत्तिबाट सधै बाच्यो ।
सबै पुस्ताका सबै जातभाईका सबै पत्रकारका वीच प्रिय कर्णसंगका सबैका स्मरणहरु ताजै होलान, सार्वजनिक होलान नै । तर पंत्तिकारको ठम्याईमा उनी कसैका पनि आखाँका नानी जस्तै थिए । कसैका वैरी थिएन्न, सधै सबैका हाई हाई रहे । व्यक्तित्व जस्तै सफा र सुुन्दर कञ्चन मनका कर्ण वाह, कति असल, कति असल । खै असल मान्छे नै चाँडो लाने यमराजले सबैका प्रिय कर्णलाई किन छिटो लग्यो, थाहा छैन । तर उनी विशुद्ध पत्रकारका रुपमा, सुदुरबाट उदाएका सौर्य पत्रकारकै रुपमा सधै बाच्नेछन, बाचिरहने छन । अलविदा कर्ण ।
19 thoughts on “अलविदा कर्ण बोहोरा : निष्ठुरी काल उनका हकमा बेशरम आयो, बेतुकमा आयो, अनायासै आयो”
Dhananjay Moktan Lama says:
हार्दिक समबेदना प्रकट गर्दछु ।
Bhagaha ma nai yasto k hunx hola kalpana samma garn sakinn manab jibn bhawan pani nisthuri nai hun dukhi lai sukhako mahasus garn didain kathaibara
बिचरा चै रहेछन | तेत्रो बिधि प्रसंसाको पुल बाध्दा खेरि स्वयम् कर्ण नै चिहान बात कराउलान है ” ल है नेपाल को नेता , बरु नेपाल पारीको मोदी कै प्रसंसा गर्नुस , उहाहरु हो प्रसंसाका भोका र बिना काम आफुलाई महान देखाउन खोज्ने | मैले केहि गरेको पनि छैन , श्रम जीबी हुँ आफ्नो पेसा मात्र गरेर खाएको हुँ ”
गालि गर्दा भित्ता छेड्ने गरि , प्रसंसा गर्दा डुब्ने गरि गर्नु हुन्न | हल्का सम्म दिएको ठिक |
Rajkumar Bohora says:
Sunakothi Bikash Maharjan says:
Rabi Mohan Adhikari says:
हार्दिक श्रद्धान जली
CK Wagle says:
पीड़ादायी भूत र वर्तमान पनी . ईश्वर तेरो इंसाफ़ काँह ? बस अब अरु सहन भयन ।
Khem Grg says:
Rita Devi Dahal says:
Ramji Khulal says:
दैव पनि कति निष्ठुरी 🙁
Kp Mainali says:
Rest In Peace …..